60 taona lasa izay, i Béchir Ben Yahmed no nametraka ny vato voalohany tamin'ny tranobe “Jeune Afrique” - Jeune Afrique - TELES RELAY
60 taona lasa izay, Bashir Ben Yahmed no nametraka ny vato voalohany tamin'ny tranobe “Jeune Afrique” - Jeune Afrique
Enimpolo taona lasa izay, rehefa nahazo fahaleovan-tena ny ankamaroan'ny firenena afrikana, dia namorona herinandro tany Tunis i Béchir Ben Yahmed izay maniry ny hitondra ny feon'ny kaontinanta iray manontolo: "Africa Action", izay dia lasa “Jeune Afrique” haingana.
Enimpolo taona lasa izay, 17 Oktobra 1960 marina. Ireo mpamaky ny Afrika miteny frantsay - tsy ny rehetra, mazava ho azy, Algeria manokana no nesorina taminy - dia hita tao amin'ny gazety ny gazety vaovao mitondra ny lohateny Africa Action. Subtitle: "Pan-Afrikanina isan-kerinandro".
Eo an-tampon'ilay hetsika dia misy duo izay fantatry ny Toniziana tsara: Mohamed Ben Smaïl, lehiben'ny famoahana, ary Béchir Ben Yahmed (BBY), izay, araka ny hotantarainy avy eo, dia mitantana ny “zavatra hafa rehetra”: andalana fanontana, fandraisana mpiasa, fisoratana anarana, varotra, fizarana, dokam-barotra, fitantanana, fifandraisana ivelany ...
Tamin'ny 1955 dia efa natomboka izy roa lahy Ny hetsika, miaraka amin'ny dikanteny "Toniziana isan-kerinandro". Avy eo, rehefa nandroso ny tantara ary nanakaiky ny ora fahaleovan-tena dia nanjary "Maghrebien" isan-kerinandro alohan'ny nialany asa tamin'ny 1958. Na izany aza, mangataka ny hateraka indray ny tetikasa, handresy isaky ny mandeha. amin'ny faniriana.
Feon'i Afrika miteny frantsay
Tamin'ity taona 1960 ity dia nifindra i Afrika, toa an'i Tonizia ... sy BBY: minisitry ny governemanta Bourguiba voalohany, avy eo ny orinasa mandroso, ny fanaovana fifanarahana ara-barotra, mandeha izy, mihaona amin'ireo mpampisaraka an'i Afrika atsimon'i Sahara sy ireo revolisionera Amerikanina latina. Rivotra mahery no mitsoka erak'izao tontolo izao. Rahampitso, Algeria mpifanolo-bodirindrina, i Afrika manontolo dia mahaleo tena. Ny haino aman-jery iray dia tsy maintsy hitondra ny feony, na izany na tsy ny an'i Afrika miteny frantsay. Hoy i BBY: “Tamin'izany fotoana izany, tsy nisy i Afrika, tsy haiko izany. Na izany aza, tamin'ny fanadinoako tanteraka, dia nilaza tamin'ny tenako aho fa mila gazety iray ho an'ny kaontinanta iray manontolo. "
Nalefan'i Bourguiba hihaona amin'ny mpitarika fahaleovan-tena kongoley Patrice Lumumba, lehiben'ny The Action niverina nanamafy tamin'ny hevitra fa ny voalaza fa "tsy fitovian'ny sivilizasiona" eo amin'ny mainty hoditra sy ny Arabo any Afrika dia tsy misy, fa ny Afrikanina Avaratra sy ny Sub-Sahara dia ampifandraisin'ny "fahatsapana firahalahiana tsy azo hazavaina".
Na eo aza izany: eo anelanelan'ny Toniziana isan-kerinandro sy ny gazety Pan-Afrika misy fizarana iraisampirenena, dia ambony hatrany ny dingana hiakarana. Raha tsy misy komplex, Ben Smaïl sy Ben Yahmed dia nandeha nitady toro-hevitra amin'ireo heverin'izy ireo ho lehiben'ny gazety amin'ny fiteny frantsay tsara indrindra tamin'izany fotoana izany: Hubert Beuve-Méry, ao amin'ny izao tontolo izao Jean-Jacques Servan-Schreiber, ao amin'ny L'Express. Rehefa nangataka azy ireo handray ny fanontana iraisam-pirenenan'ilay gazetiny ny faharoa dia nanda tamim-panajana izy roa lahy. Tsy tetikasan'izy ireo mihitsy izany.
Miaraka amin'ity "pan-Afrikana isan-kerinandro" vaovao ity dia voasoratra eo imason'ny mpamaky azy voalohany ny tantara
Any Gammarth, ao amin'ny trano kely ananan'i BBY amoron-dranomasina, no namolavolana ny ho avy gazety nandritra ny tapany voalohany tamin'ny 1960. Natsangana tamin'ny Jolay ny orinasan-gazety. Ny renivohiny manetriketrika (dinara 1 tamin'izany fotoana izany) dia zarain'ny mpizara roa: BBY sy ny mpisolovava kaominista Othman Ben Aleya, izay hisotro ronono taona vitsy taty aoriana. Tsy misy ny vola fa misy banky vitsivitsy manaraka: rehefa dinihina tokoa, Ny hetsika, natolotry ny ekipa iray ihany, nahasarika mpamaky 15. Africa Action Tokony hahomby amin'ny famerenana azy ireo ...
Ny famakiana ny "Afrique Action", ny Toniziana notarihin'i Béchir Ben Yahmed isan-kerinandro, nataon'ny miaramila Toniziana nandritra ny ady tany Bizerte, 26 Jolay 1961 © Studio Kahia / Archives Jeune Afrique
Ny gazety dia mandray ny efitranony amin'ny trano kely misy rihana roa misy avenue de la Liberté, ao Tunis, akaikin'ny zaridainan'i Belvédère. Ny mpiasa amin'ny famoahana lahatsoratra, napetraka eo an-tampony, dia tsy manana mpiara-miasa vitsivitsy fotsiny: mpaka sary-mpaka sary Abdelhamid Kahia, Josie Fanon (vadin'i Frantz), Dorra Ben Ayed, ary koa Frantsay iray miafina, tsy mety manao miaramila noho ny feon'ny fieritreretany. an'ny kontinanta napetraka ao Algeria, tsy misy tena te hahalala, izay miantso ny tenany hoe "Girard". Jean Daniel dia manolotra torohevitra sy lahatsoratra, toa an'i Guy Sitbon - avy eo ilay mpitondratenin'ny izao tontolo izao any Tonizia - sy Tom Brady, solontenan'ny New York Times. Noho ny tsy fahampian'ny loharanom-pahalalana sy ny mpiasa ampy dia tsy maintsy mahalala ny fomba anaovany ny zava-drehetra ny tsirairay ary saika tsy manisa ny ora ampiasainy.
Eo amin'ny rihana ambanin'ny trano dia i Chérif Toumi, lehilahy miandraikitra ny fitantanam-bola. "Miara-miory, manampy, mora tohina nefa mijaly, raha ny volan'ny gazety no resahina, ny aretin-koditra lava eo anilan'ny vatasarotana", hoy ny nosoratan'i François Poli, lehiben'ny fanoratana ny lahatsoratra taty aoriana. Fanoratana indray, amin'ny lingo.
Ny gazety dia vita pirinty amin'ny presse an'ny moribund Fandefasana Toniziana. Ny tarehimarika voalohany dia mandoto ny rantsan-tànana ary, milaza ireo taloha, feno typos, fa ny tena ilaina dia tsy ao. Amin'ity 17 Oktobra ity dia ao amin'ny fivarotam-baovao ny "pan-Afrikana isan-kerinandro" vaovao, ary ny tantara dia soratana eo imason'ny mpamaky azy voalohany.
Eo amin'ny fonony, ny fahaizany mitonona sary dia tsy afaka manaja afa-tsy ny sarin'i Dag Hammarskjöld, sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana, izay handray anjara amin'ny foibe satria notsikeraina tamin'ny fidirana ho an'ny fahaleovantenan'ny DR Congo, taloha hanjavona tamin'ny 1961 tamin'ny fianjerana tamin'ny rivotra. Ireo lohateny roa hafa momba ny fonony: "Enimpolo andro miaraka amin'i Lumumba" sy "Bourguiba: la Chine et nous".
Am-polony taona maro taty aoriana, ireo mpisava lalana rehetra amin'ity ekipa mpanorina ity dia hahatadidy ny hatsikana tsara nanjaka tamin'izany fotoana izany. Tsaroan'i François Poli ny fifanakalozan-kevitra "eo amoron'ny morontsiraka na eny amoron-dranomasina, amin'ny akanjo lava, eo anelanelan'ny fandroana roa ao anaty ranomasina sy divay roa misy divay rosé". Nandritra izany fotoana izany dia nino i Guy Sitbon fa afaka milaza izy fa ny fanapaha-kevitra hanangana gazety manerana ny kaontinanta dia noraisin'i BBY nandritra ny lalao baolina kitra: "Efatra izahay: Tom Brady, Jean Daniel, Béchir Ben Yahmed sy ny oloko. Izy efatra ao anaty vatan-dranomandry, izaho amin'ny ekipa miaraka amin'i Bashir, izay saika hitifitra. Nanao fanamafisam-peo mafy izy: "Raha mahazo isa aho dia mamorona diary". »Fahatsiarovana nofy? Eken'ny mpanao gazety izany: "Mahatalanjona ny fahatsiarovako". Saingy tsy misy manimba ny fahafinaretana, satria, fehiny, “tanora sy tsara tarehy i Afrika. Etazonia koa. "
Bourguiba dia tsy mankasitraka ny famoahana gazety izay tsy voafehiny ny atiny
Vetivety dia mitombo ny ekipa. Misokatra ny birao iray any Paris, izay hotantanan'i Robert Barrat, avy eo Paul-Marie de La Gorce. Avenue de la Liberté, mifanara-dia ireo mpitsidika. Betsaka no lasa mahazatra sy mpinamana. Noraisina ny mpiasa vaovao. “Sambany izao, hoy ny tsaroan'i BBY, dia nisy zava-nisongadina tamin'ny mpanao gazety miteny frantsay tany ivelan'i Frantsa. Izany no nahasarika ny tetikasa, tsy lazaina intsony ny masoandro, ny hakamoana, ny ranomasina, ny toetrandro mahafinaritra amin'ny vanim-potoana rehetra, ekipa miray hina. Nahafinaritra ny fiainana. "
"Eo ambany fanaraha-maso"
Kanto, nefa sarotra. Habib Bourguiba, izay nisafidy an'i BBY hijanona eo anilany ary hanolo-tena amin'ny politika, dia tsy dia nankasitraka loatra ny famoahana azy tao amin'ny renivohitry ny gazety iray izay tsy voafehiny ny atiny. Efa, rehefa tonga ny minisitra teo aloha hampitandrina azy fa efa hanomboka Africa Action, tsy nanafina ny fisalasalany ny Supreme Fighter, nandrisika ilay heveriny ho tanora mpiaro azy hahafoy ny tetikasany na, noho ny tsy fananana zavatra tsara kokoa, hanankinana izany amin'ny hafa.
Manoloana ny hamafin'ny BBY dia niafara tamim-pihambahambana tamim-pihambahambana izy: “Eny, ratsy loatra. Mandehana. Raby Maak "(ie" Andriamanitra manohana anao "). "Tokony ho azoko tsara fa ho arahi-maso aho", hoy ny mpanao gazety taoriana kelin'izay.
Ny herinandro dia zara raha herintaona rehefa potika ny fandanjana marefo. Teo anelanelan'ny volana Mey sy septambra 1961, vao niaina ny "raharaha Bizerte" i Tonizia: mbola manana tobin'ny miaramila any amin'ity tanàna avaratra ity ny Frantsay, ary i Bourguiba, tapa-kevitra ny hiala, dia nifidy ny fampirantiana, na eo aza ny fampitandremana avy amin'ny mpiara-dia aminy sy ny mpiasa ao amin'ny tafiny. Militarily, vita ny loza, saingy nanaiky ny hanafaka ny toby tany 1963 i de Gaulle.
Tsy mankasitraka ny fomba i BBY. Nolazainy izany, ary indrindra manoratra azy amin'ny famoahana lahatsoratra tamin'ny Oktobra 1961. "Herin'ny tena manokana", "avonavona", "fanamavoana" ... Mahery ny teny. Telefaona Bourguiba, manomboka ny fifanakalozan-kevitra lava. “Marina ny hevitrao, hoy ny filoha, saingy tsy mihatra amiko izany, ho haiko ny fomba hisorohana ireo fandrika fariparitanao. Mifamela ho namana tsara isika, farafaharatsiny amin'ny bika aman'endriny. Sady tsy voarara no tsy voasambotra ny gazety.
Haingana be, etsy ankilany, dia navoaka ny gazety "ofisialy" Africa Action. Tsy misy fahombiazana be. Mandra-pahatongan'ny andro nanaovan'ny governoran'i Tunis, notendren'ny Supreme Combatant, ny akanjo fanamiany tsara indrindra ary niseho teo amin'ny foiben'ny gazety izy. "Ny filoham-pirenena," hoy ny fanazavany tamin'i BBY, "dia mangataka amiko hampahatsiahy anao izany lohateny izany Africa Action azy ary maniry ny hamerina izany izy ”.
Gaga ny ekipa. Mazava ho azy fa nandefa ilay gazety i Bourguiba, tamin'ny 1930 tany ho any Hetsika Toniziana, fa ity lohateny ity dia efa nanjavona hatry ny ela, ary avy eo namintina fa ny teny hoe "Action" dia fananany ...
Fantany fa efa lasa ny fotoana hiadian-kevitra, nanontany i BBY raha afaka mandray soa mandritra ny herinandro vitsivitsy izy, fotoana hampahafantarana ireo mpamaky ny fanovana ny lohateny. Ny governora dia nandefa ary niantso niverina ny ampitson'io: tsy tara. Roa andro alohan'ny fanidiana, Africa Action tsy manana anarana intsony.
"Nandao ny birao aho mba hamelombelona ny eritreritro sy hitady vahaolana," hoy ny tsaroan'i BBY. Ny lohateny vaovao, mazava ho azy, dia tsy maintsy nisy ny teny hoe "Africa". " Fa mbola ? "Tsy nahita aho, raha tsy nijery mafy loatra, Young Africa, mamarana izy. Mbola tanora i Afrika, maninona ary? Ny herinandro manaraka, 21 Novambra 1961, dia niseho ny laharana "tena" voalohany an'ny Young Africa.
Belzika: mamerina mandamina ny tenany i Bruxelles nefa tsy milaza izany
India: Mehbooba Mufti tsy manaja ny sainam-pirenena Indiana; Andininy 370…
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny https://www.jeuneafrique.com/1058406/cultural/il-y-a-60-ans-bechir-ben-yahmed-posait-la-premiere-pierre-de-ledifice-jeune -afrique /? utm_source = tanora Africa & utm_ Medium = flux-rss & utm_campaign = flux-rss-young-africa-15-05-2018
TELES RELAY 26959 Lahatsoratra 1 hevitra
Artemisia, baobab… Ireo zavamaniry afrikanina afaka manampy amin'ny ady amin'ny coronavirus - Jeune Afrique
India: Mehbooba Mufti tsy manaja ny sainam-pirenena Indiana; Tsy haverina amin'ny laoniny ny andininy 370:…
Kamerona Anglophone: zazalahy mitam-piadiana mamono zaza 8 ao amin'ny sekoly iray any Kumba